စက်မှုဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် လူစီးနှင့် ကုန်တင်မော်တော်ယာဉ် အမျိုးမျိုး၊ ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းသုံး ယာဉ်ယန္တရားအမျိုးမျိုး ဒီဇယ်အင်ဂျင်ကြီးများ၊ မော်တော်ယာဉ် အစိတ်အပိုင်းများ၊ တာဘိုင်များ၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်များ၊ ရေတွင်းတူးစက်များ၊ အဆင့်မြင့်စက်ကိရိယာ (CNC Machine)များ၊ ထရန်စဖော်မာများ၊ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ၊ လယ်ယာသုံး စက်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုး၊ တာယာများ၊ ရော်ဘာဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ခေတ်မီပြီး နည်းပညာမြင့်မားသော ထုတ်ကုန်များ ထုတ်လုပ်ရန်အတွက် စက်ရုံအသစ်များ တည်ထောင်ခြင်း၊ စက်မှုကျွမ်းကျင်လုပ်သားများ ပေါ်ထွက်လာရေးအတွက် လေ့ကျင့်သင်ကြား ပေးမည့် စက်မှုသင်တန်းကျောင်းများ တည်ထောင်ခြင်းတို့ကို အဓိကဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၂) ရက်မှစ၍ အမှတ် (၁) စက်မှုဝန်ကြီးဌာနနှင့်အမှတ် (၂) စက်မှု ဝန်ကြီးဌာနတို့ကို စက်မှုဝန်ကြီးဌာနအဖြစ် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။
စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၏ဖွဲ့စည်းပုံအား ဒီမိုကရေစီအစိုးရနှင့်လျော်ညီစွာ ကျစ်လစ်သိပ်သည်း စွာဖြင့် ဖွဲ့စည်းနိုင်ရေးအတွက် အဆိုပြုဖွဲ့စည်းပုံအရ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ (၄) ရက်နေ့မှစ၍ စက်မှုဝန်ကြီးဌာနအား ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး၊ ဦးစီးဌာန (၃) ခု၊ လုပ်ငန်းဌာန (၆) ခုနှင့် ဗဟို ဌာန (၂) ခုတို့ဖြင့် ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရေးဆွဲသည့် အဆိုပြုဖွဲ့စည်းပုံတွင် အသေးစားနှင့်အလတ်စားလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဗဟိုဌာနကို ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းသစ်၊ အမှတ် (၃၅-ဘီ/၁၅) တွင် ဖွင့်လှစ်ထားပါသည်။
အသေးစားနှင့်အလတ်စားလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဗဟိုဌာနအား ဌာနကြီး (၃) ခုဖြင့် အောက်ပါအတိုင်းဖွဲ့စည်းထားပါသည် -
အဆိုပါ ဌာန (၃) ခုအနေဖြင့် SMEs များ၏ database တည်ဆောက်လျက် လိုအပ်သည့် အကူအညီများ၊ သတင်းအချက်အလက်များပံ့ပိုးပေးခြင်း၊ SMEs များ၏ လုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့် ငွေကြေးရယူလိုခြင်းများအတွက် ကူညီပံ့ပိုးပေးခြင်း၊ လုပ်ငန်းစတင်တည်ထောင်လိုသူများအတွက် အကြံဉာဏ်နှင့် သတင်းအချက်အလက်များဖြင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပေးခြင်း၊ အလုပ်ရုံဆွေးနွေး ပွဲများ၊ သင်တန်းများပို့ချခြင်း၊ Public Private Dialogue အစီအစဉ်များကို ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊ ASEAN SMEs Portal နှင့် ချိတ်ဆက်၍ Online Servicing ပေးခြင်း၊ Business Matching များ ပြုလုပ်၍ ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ SMEs များအား ချိတ်ဆက်ပေးခြင်း၊ ပြည်ပဈေးကွက် ရရှိရန်အတွက် Cluster နှင့် Potential Cluster များ ဖွဲ့စည်း ပေးခြင်းများ ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။
ထို့နောက် စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၏ (၁၈.၆.၂၀၁၄)ရက်စွဲပါ စာအမှတ် ၁၅၁၅(၅)ဝထ(၂)(၆/၆)၂၀၁၄(၅၄၈၅) ဖြင့် ထုတ်ပြန်သော အမိန့်ကြော်ငြာစာအရ စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနအား (၁.၄.၂၀၁၄) ရက်နေ့မှစ၍ အသေးစားနှင့် အလတ်စားလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတတ်ရေးဗဟိုဌာနကို စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန အောက်သို့ သွတ်သွင်း၍ ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ သို့ဖြစ်ရာ အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေး လုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဗဟိုဌာနကိုလည်း ၂၀၁၄ခုနှစ်၊ ဧပြီလမှစပြီး အသေးစားနှင့်အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဌာနအဖြစ် ပြောင်းလဲတိုးချဲ့ခြင်း၊ အသေးစားနှင့်အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဌာန၊ ရုံးခွဲ(၅၀)ကို တိုင်းနှင့်ပြည်နယ်၊ ခရိုင်နယ်မြေများမှာ အသစ်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၊ နို်င်ငံတော်သမ္မတရုံး၏ (၉.၁.၂၀၁၃)ရက်စွဲပါ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၁၁/၂၀၁၃ဖြင့် အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးဗဟိုကော်မတီနှင့် အသေးစားနှင့်အလတ်စားလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းကော်မတီကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုး တိုးတက် ရေးအတွက် လိုအပ်သောဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းခြင်း၊ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၃၆ နှင့်အညီ အမျိုးသားစီးပွားရေးတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် နိုင်ငံတော်၊ ဒေသဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ၊ သမဝါယမအဖွဲ့အစည်းများ၊ ဖက်စပ်အဖွဲ့အစည်း များ၊ ပုဂ္ဂလိကစသည့်စီးပွားရေးအင်အားစုများတွင် အချိုးအစားအများဆုံးပါဝင်နေသည့် အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အားပေးမြှင့်တင်ခြင်း၊ အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် လိုအပ် သည့် ငွေကြေးအရင်းအနှီးအတွက် အစိုးရနှင့်ပုဂ္ဂလိကဘဏ်များမှ ထိထိရောက်ရောက် ကူညီပံ့ပိုးနုင်ခြင်း၊ နည်းပညာလိုအပ်ချက်အတွက် ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပအဖွဲ့အစည်းအသီးသီးနှင့် ချိတ်ဆက်ပညာပေးမြှင့်တင်ခြင်း၊ မြို့ပြမှကျေးလက်အထိ အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်း ဈေးကွက်နှင့် အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဈေးကွက်များဖွံ့ဖြိုးရေး အားပေးမြှင့်တင်ခြင်း၊ ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများအတွက် အထောက်အကူပြုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ (Supporting Industries) အဖြစ် ပုံမှန်ဈေးကွက်ချိတ်ဆက်မှုဖြစ်ထွန်းတိုးတက်လာစေရေး ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် လိုအပ်သည့် လူသားအရင်းအမြစ် လေ့ကျင့်ပြုစုပျိုးထောင်ရေး စီမံပေးခြင်း၊ လိုအပ်သည့် ကော်မတီ၊ ဆပ်ကော်မတီများဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်ခြင်း၊
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနို်င်ငံတော်၊ နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး၏ (၂၉.၃.၂၀၁၆) ရက်စွဲပါ စာအမှတ်၊ ၁၁၂(၁)/၈/သမ္မတရုံးဖြင့် ဖွဲ့စည်းပေးထားသော ကော်မတီများနှင့် အဖွဲ့အစည်း များအား ဖျက်သိမ်းခဲ့ပါသည်။
ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံး၏ (၇.၆.၂၀၁၆) ရက်စွဲပါစာအမှတ်၊ ၄၉၈/၁၆၅-အဖရ (SME) ၂၀၁၆ ဖြင့် အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဗဟို ကော်မတီကို ဖွဲ့စည်းပြီးဖြစ်ပါသည်။
Copyright © 2017 SME Development Agency. All Rights Reserved. Developed by DMYANMAR